Shopify inoshanda sei? | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Kushambadzira kwenhare
Shopify ikambani yeCanada e-commerce inotungamirwa muCanada iyo inogadzira software yezita rimwe chete, iro rinove nebasa rekupa akateedzana masevhisi anosanganisira kubhadhara, kushambadzira, kutumira uye maturusi. mutengi kuvimbika kurerutsa maitiro ekumhanyisa online chitoro kune vashoma vatengesi.
Nezvishandiso zvakakura zvekutengesa zvemagetsi, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora mune mashoma mashoma. Nekuti zvirizvo, Shopify inovhura nhevedzano yemikana inonakidza kwazvo yekutengesa kwezvinhu zvako, masevhisi kana zvinyorwa. Kubva pane ino maonero, iwe unofanirwa kufunga kubva ikozvino izvo chimbo chaunogona kushandisa kusimudzira yako online chitoro kana kutengeserana.
Asi iwe unoda kuziva kuti Shopify inoshanda sei chaizvo. Zvakanaka, chishandiso chedigital chinokutendera iwe kuti utengese zvigadzirwa zvako painternet pamwe nekwanisi yekugadzira yako chitoro chepamhepo kune chako kufarira pasina chikonzero chehurongwa hwekuziva. Kunyangwe isiri imwe yeanonyanya kuzivikanwa, mabhizinesi mazhinji uye mazhinji ari kutanga avo online store uchishandisa Shopify. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vashandisi vayo havadi ruzivo rwakakosha nezvekushandisa kwayo.
1 Shopify: maumbirwo uye mashandiro ayo
2 Yakagadzirirwa marudzi ese ezvigadzirwa
3 Kugamuchirwa kwemirairo nekukurumidza kwazvo
4 Unyanzvi hunhu hwakagadziridzwa zvakanyanya kune zvaunoda
5 Inopa inonzwisisika interface
6 Kugadzirisa SEO
7 Imwe yemabhenefiti akakosha
Shopify: maumbirwo uye mashandiro ayo
Iyo sisitimu inounza akasiyana siyana mabhenefiti kune vashandisi, sezvaunoona pazasi. Nekuti kushanduka kwayo ndeimwe yeanonyanya kukosha madhinomine kubva kune ese maonero maonero. Nemipiro inotevera iyo yatichazokufumura pazasi:
Nemhando dzakasiyana dzekubhadhara
Ichi ndicho chimwe chehunhu hunotsanangura uyu modhi uchienzaniswa nevanokwikwidza nawo. Nekuti pakupera kwezuva rine mari inodarika makumi manomwe emari kubhadhara kwenyika izvo zvinokutendera iwe kuti utengese imomo uye mune dzimwe nyika. Iwe hauzove nezvikonzero zvekusashaya chombo chekushandisa nacho mukutengesa kwako kwemagetsi.
Paunenge uri kune rumwe rutivi, usakanganwa kuti iwe unogona kusarudza iyo modhi inokodzera zvakanyanya hunhu hwako semushandisi kana mutengi wepuratifomu yepamhepo. Iwe uchagara uine rutsigiro rwemari kuendesa kubhadharisa zvaunotenga, nguva dzose kubva kune maonero epasirese.
Yakagadzirirwa marudzi ese ezvigadzirwa
Imwe yemabhenefiti ayo makuru iri mukuti iwe une mukana wakanaka, iyo inopa ako vatengi ese ese marudzi ezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Nenzira isina muganho uye kusvika padanho rekuti vanogona kuunzwa kunze kana kutumirwa kunze kwenyika kuburikidza nhevedzano ye kwesainzi mafomu kuitira kuti ndikwanise kufambisa iri basa rinozonyanya kudikanwa mune rako basa rehunyanzvi.
Nepo kune rimwe divi, iwo mukana unovhura kwauri kubva ikozvino zvichienda kuti iwe ugone kuwedzera rako bhizinesi mikana nenzira ine hungwaru uye yakaenzana panguva imwe chete. Kunyanya kunyanya panguva yekuwedzera mune rako bhizinesi uye sezvishoma zviridzwa zvavanokupa mune ino pfungwa. Pane zvinopesana, kushanda kwayo kwakanyanya uye iwe uchave unokwanisa kuona ayo mhedzisiro kunyanya nekukurumidza.
Kugamuchirwa kwemirairo nekukurumidza kwazvo
Ehezve, ndeimwe yehunhu hwayo hwakakosha nekuti unozogamuchira email kana nhare mbozha nguva dzese dzaunogamuchira kutengeswa kutsva. Vatengi vakaita sekukasira kwebasa uye kubva panguva ino yekutarisa chirongwa ichi ndechimwe che chinogutsa pane iwe panguva ino. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinokubatsira maneja maodha mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva, inogona kutorapwa mune nyaya yemasekondi. Kupedza maitiro aya nekugutsikana kukuru kune vese mapato akasanganiswa mairi, sezviriwo zvido zvavo.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti chishandiso chebasa chinodzikamisa mabasa atakataura nezvazvo nekubudirira kukuru. Saka kuti nenzira iyi, haufanire kunetseka nezve zvimwe zvinhu uye kutarisisa pane mamwe akakosha mabasa muchiitiko cheako chiitiko chehunyanzvi kubva zvino zvichienda mberi. Uye ndiko kuti, shure kwezvose, chii chinobatanidzwa mune idzi dzakatarwa zviitiko zvevatengesi mune ino yakasarudzika chikamu.
Izvo zviri nyore kwazvo kushandisa, kunyangwe kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakanyanya inyaya yekuti imwe yemipiro yayo yakakosha inowana kubva pakuti manejimendi manejimendi manejimendi kune vese vashandisi. Kusvika padanho rekuti pakupedzisira iwe uchaona kuti zvichave nyore kwazvo kuti iwe ugadzire, gadzirisa uye gadzirira yako online chitoro kuti utange kutengesa munguva pfupi, uye unogona zvakare kugadzira blog yekusimudzira chitoro chako nayo. Sezvo iri mushure mezvimwe zvezvinangwa zvawakaronga kana uchitanga chitoro chako kana bhizinesi repamhepo. Kunyangwe paine imwe nhevedzano yehunhu hwatiri kuzokufumura iwe unotevera.
Unyanzvi hunhu hwakagadziridzwa zvakanyanya kune zvaunoda
Iyi yepamhepo manejimendi system ndeyechokwadi mukana wakakura iwe uye zvaunofarira mukati mekutengesa zvemagetsi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti inokupa iwe nebandwidth isina muganho, saka haufanire kunetseka nezvekubhadhara zvakanyanya zvichienderana nemugwagwa wechitoro chako kana vashanyi.
Uye zvakare, uye semhedzisiro yemupiro uyu, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira ichakubatsira ine mari yemari mukati mekambani yako. Ndokunge, nawo unogona kuchengetedza mari yakawanda kupfuura iwe yaunogona kufungidzira kubva pakutanga. Kuve chinopfuura chikonzero chakatetepa chekuchiisa kunze kubva panguva ino chaiyo. Nepo kune rimwe divi, zvinokuratidza kuti iwe unogona kubata rako rejineri bhizinesi zvirinani kupfuura kupfuura mamwe akaomesesa asi mashoma mashandiro masisitimu kana zvirongwa maererano nezvavanowana.
Inopa inonzwisisika interface
Imwe yemipiro yake yakakosha ndeye iyo inotorwa kubva kuchinhu chekuti manejimendi wechitoro chako chepamhepo anoitwa nyore nyore nekuda kweiyo kureruka kukuru iyo inopa chimiro chayo. Izvo hazvidi kuti uve neyakaitika ruzivo kuti uzive mashandisiro eako online chitoro. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kurangarira kubva zvino izvo Shopify inokupa zvese zvaunoda kuti, mune imwe nyaya yemasekondi, iwe ugone kuziva kuti software inoshanda sei, pamwe nekuwana zvakanyanya kubva kune kwese kushanda kwayo uye hunhu hwandiri kutsanangura mune ino poindi.
Kune rimwe divi, iyi interface inoratidzwa nechirongwa ichi inoenderana neprofita yevashandisi vese sezvo ichinyatso shanduka mumabasa ayo ainogadzira. Kusvika pakuti ichave inonzwisisika uye inoshanda maitiro uye pasina kutambisa nguva yakawanda kubhurawuza. Sezvo zvichizokutendera iwe kuti ugamuchire yakakwira traffic uye icho chinhu icho pasina mubvunzo chinokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda zvakanyanya nesimba shoma pane rako.
Mukati mehunhu uhwu, haugone kukanganwa kuti chirongwa ichi mukutungamira kwechitoro chako kana zvekutengeserana nedigital zvichaita kuti ako manejimendi mabasa ave nyore kubva pakutanga. Saka chimbo chakasimba kwazvo kuti iwe uvandudze bhizinesi rako zvishoma nezvishoma uye nenzira inoshanda, pamusoro pemamwe masisitimu ane hunhu hwakafanana kubva kune ese maonero maonero. Kuva, shure kwezvose, chii chinobatanidzwa murudzi urwu rwekuita kwakakosha.
Shopify inopawo zvishandiso zvakakwana kuti iwe uwane ichi chinangwa chakamirirwa kwenguva refu. Kunyangwe uri pasi penhevedzano yenongedzo iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo panguva yako manejimendi. Nepo kune rimwe divi, chishandiso icho zvakare chinokugonesa iwe kuti ugadzire blog yekupa zvimwe zvemukati kune vashandisi, kuwedzera nharaunda yebhizinesi rako nekusimudzira chitoro chako nacho. Iine zvine musoro zvine chekuita nekushambadzira kwezvako zvese zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa.
Nepo chimwe chikamu chinokutendera kuti uwedzere icho chine chekuita nemufananidzo unogona kupihwa kubva pawebhusaiti yechitoro chedu kana chitoro chepamhepo. Kusvika padanho rekuti inogona kuve chinhu chinosiyanisa chinopesana nemakwikwi kusangana nezvinodiwa kubva kune vatengi kana vashandisi. Mupfungwa iyi, inogona kushandiswa semukana webhizinesi pamusoro uye pamusoro pemamwe marudzi ekufungisisa ehunhu hwakasiyana. Zvekuti nenzira iyi, bhizinesi mutsetse unogona kusimudzirwa mune dzakaomesesa nguva dzekusimudzira uye izvo zviri mushure meimwe yazvo irikurumidza uye kusvika kune imwe nhanho inodiwa zvinangwa.
Imwe yemabhenefiti akakosha
Na Shopify, kugadzira uye kuvhura chitoro chepamhepo inyaya yemasekondi. Chinhu chakakosha mukana wekuti zviitwe zvekutanga bhizimusi repamhepo munguva pfupi. Ipuratifomu inokutungamira nhanho nhanho kuburikidza nenzira yekumisikidza rako pachako chitoro, uchizvigadzirisa pane zvaunofarira, kugadzira dhizaini uye, pakupedzisira, kuwedzera zvigadzirwa zvako. Mukuteedzana kuri nyore kwezviito izvo zvisingatore maminetsi mashoma kana maawa, zvinoenderana nemagadziriro aunoita. Nekudaro, kana iwe ukafananidza iwo maawa nemazuva akati wandei kana mwedzi iyo yainogona kutora nevamwe vanopa, iwe uchaona kuti urikuchengetedza yakakosha nguva uye, pamwe, zviwanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Shopify inoshanda sei?
Rubatsiro kune ecommerce yakakanganiswa nedambudziko